Dilemma sy fanantenana amin'ny fanabeazana momba ny zon'olombelona - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
[31 Oktobra 2021] Andro 31 nankalazaina iraisam-pirenena hampiroboroboana ny fandriampahalemana sy ny rariny Hetsika sy fihaonambe
[30 Oktobra 2021] Sodàna Atsimo dia namoaka 'Torolalana Fanambarana Sekoly Azo antoka' miaraka amin'ny fanohanan'ny Save the Children mba hiarovana ny sekoly amin'ny fampiasana miaramila Vaovao sy hevi-dehibe
Dilemma sy fanantenana amin'ny fanabeazana momba ny zon'olombelona
Enga anie 12, 2018 Fampitaham-baovao 0
Ny olana manokana "Dilemma sy fanantenana amin'ny fanabeazana ny zon'olombelona" dia navoakan'i Prospect: Famerenana fampitahana ny fanabeazana mampitaha. Ity olana ity dia azo jerena eto amin'ny Internet.
Ity olana ity dia mampiseho ohatra avy amin'ny Global South sy Global North, mandinika ireo teoria farany teo, ireo fanamby ary ireo vahaolana hahafahana manatona ny HRE amin'ny alàlan'ny fanoherana ny mason'ny fahefam-panjakana. Avy amin'ny ohatra avy any Silia, Shina, Gresy, Pakistan, India, Netherlands, Afrika Atsimo, Suisse ary Etazonia, ireo lahatsoratra dia manadihady ny elanelana misy eo amin'ny fakany emancipatory an'ny HRE sy ireo politika sy fanabeazana niainan'ireo fanjakana sy sekoly.
# fanabeazana zon'olombelona
Peace Science Digest - Volume 3, Laharana 2
Mikasika ny Frameworks sy ny tanjona: valin'ny valinteny nataon'i Dale Snauwaert momba ny “vanim-potoanan'ny fampandrosoana maharitra” an'i Jeffrey Sachs
Amnesty International: mpandrindra ny fanabeazana momba ny zon'olombelona
Aprily 17, 2017 Jobs 0
Ny biraom-paritry ny Amnesty International any London dia mitady mpandrindra ny fanabeazana momba ny zon'olombelona efa za-draharaha. [tohizo ny famakiana…]
Fianarana an-tserasera momba ny zon'olombelona maimaim-poana
Novambra 21, 2016 Fianarana / fandaharam-pianarana, Fiofanana / atrikasa 0
Humanrightscareers.com dia nitahiry lisitra malalaka momba ny fampianarana an-tserasera maimaimpoana mifandraika amin'ny fandriam-pahalemana, zon'olombelona, ​​fitsarana ara-tsosialy ary fitovian'ny miralenta. [tohizo ny famakiana…]
Fampianarana ho an'ny fandriam-pahalemana: fanabeazana amin'ny ady sy fanarenana
Jolay 1, 2019 Research 0
Alison Baily, manam-pahaizana momba ny fiarovana sy ny fitoniana ao amin'ny British Council, dia mamintina ny fikarohana vaovao mizaha ny anjara asan'ny fanabeazana amin'ny ady sy ny fanarenana. [tohizo ny famakiana…]